I-Terrace of the Alps yabantu abayi-3. - I-Airbnb
I-Terrace of the Alps yabantu abayi-3.
UStephanie - Interhome Group unezimvo eziyi-424 zezinye iindawo.
Igumbi eliyi-1 53 m2 kumgangatho wokuqala. Izinto ezilungeleyo abantu abadala abayi-2 + umntwana omnye. Igumbi lokuhlala/lokutyela elinomnyango otyibilikayo onesofa eyi-1 (iisentimitha eziyi-120, ubude be-180 cm), i-cable TV. I-Alcove enomnyango otyibilikayo onebhedi elala abantu ababini enye (iisentimitha eziyi-2 x 90, ubude be-137 cm). (ioveni, umatshini wokuhlamba izitya, iithempleyithi eziyi-3 zeglasi ye-ceramic hob, i-toaster, iketile...
..., i-microwave, umatshini wokwenza ikofu wombane, i-fondue Set (itshizi). Ibhafu/WC, sep. WC. I-Terrace 17 m2, indawo ejonge kumzantsi. Ifenitshala ye-terrace. Ukubona kakuhle iintaba. Izixhobo: isixhobo sokomisa iinwele. I-intanethi (i-wifi, yasimahla). Indawo yegaraji n 7 (iimoto eziyi-2), ukuphakama kwe-200 cm, ububanzi iisentimitha eziyi- Nceda uqaphele: abantu abangatshayiyo kuphela. Elona nani likhulu lezilwanyana zasekhaya/ inja livumelekile.
Hillside complex "Terrasse des Alpes". Kwisithili saseMarigny 400 m ukusuka embindini weMontana, kwindawo enelanga. Ukusetyenziswa nangabanye abantu: ipuli yangaphakathi enamanzi ashushu (12 x 5 m, ukufumaneka kwamaxesha athile onyaka: 01.Jan.-31.Oct. kunye 01.Dec.-31.Dec. iiyure zokuvula ipuli: 08: 00-20: 00). Ibhafu enamanzi ashushu, i-terrace. Endlini: indawo yokuphumla, ilifti, igumbi lokugcina ii-skis, umatshini wokuhlamba impahla, umatshini wokomisa i-umble (ukuze usetyenziswe nangabanye abantu, okongezelelweyo). Ivenkile, ivenkile enkulu, ivenkile yokutyela, ibhari, i-café 400 m, indawo yokuphola yebhasi "Montana Poste" 300 m. Ibala legalufu (umngxuma oyi-18) 3.8 km, iindawo ze-skisport 1.5 km. Ipuli yokuqubha (malunga ne-26 °) kunye nebhafu enamanzi ashushu zivaliwe ngoNovemba. Ibhafu enamanzi ashushu eneminyaka eyi-16 ubudala. Isakhiwo sakhiwe kwindawo ethambekileyo. Imigangatho kufuneka ijongwe njengamanqanaba (ibalwa ukusuka kumatye asemva kwendawo yokuhlala). Xa kukho ikhephu elinzima, akuvumelekanga ukulandelelana komlawuli wokucoca amatye.